Ọnwa ole na Basque: ndepụta na ihe ọ pụtara - UniProyecta
Ọnwa ndị dị na Basque
Otu njiri mara asụsụ Basque bụ na ọ bụ nke kacha ochie (ama ama) na Europe. Ọzọkwa, dị ka ndị nyocha si kwuo, Basque bụ otu n'ime asụsụ ole na ole ka na -eji taa na amabeghị ebe o si malite. Ndị ọkà mmụta asụsụ na -agbachitere na Basque ketara ozugbo n'asụsụ ndị na -asụ ya na dịka akụkọ ihe mere eme si kwuo, Ndị bi n'ọgba nke Ekain, Lascaux na Altamira kwuru asụsụ a afọ 15.000 gara aga..
Akụkọ banyere asụsụ a bidoro n'oge Neolithic, mana enwere ike ịhụ ihe akaebe na mbido Euskera malitere n'oge gara aga. Ugbu a, 37% nke ndị Basque na -asụ Euskera, ya bụ, ihe dị ka otu nde mmadụ. Na mpaghara ala ebe ndị Basques bi, achọtala ọtụtụ foduru nke oge Paleolithic, nke pụtara na asụsụ a nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme.
N’isiokwu a anyị ga-ahụ a ndepụta ọnwa na Basque nwere ọmụmaatụ atụ dị iche iche ka ị nwee ike kwupụta uche gị nke ọma ma ọ bụ opekata mpe ghọta ihe ndị mmadụ na -ekwu.
1 Ndepụta ọnwa na Basque na atụ
1.1 Ihe atụ
1.2 Abụ nke ọnwa na Basque
Ndepụta ọnwa na Basque na atụ
Tupu anyị agawa ọnwa, ka anyị hụ ihe ejiri ha mee. Ụbọchị izu bụ:
Ihe atụ ụfọdụ nke ụbọchị izu na Basque:
Na Mọnde, mụ na ndị enyi m ga -aga sinima: Astelehenean nire zinemara joango naiz nire lagunekin
Anyị ga -aga n'ọfịs na Tuesday ka anyị na onye isi ahụ kwurịta okwu: Asteartera bulegoetara joan behar dugu buruzagiarekin hitz egiteko
Dabere na amụma ihu igwe na Wednesde, a ga -enwe ihu igwe na -ekpo ọkụ: Asteazken eguraldiaren arabera, klima beroa egongo da
Tọzdee bụ ụbọchị izu na -adịghị amasị m: A ga -akọwapụta nke a n'ụzọ zuru ezu
Echere m na Fraịde, mụ na ndị enyi m ga -aga mkpagharị: Uste dut ostiralean nire lagunekin paseatuko dut
Na Satọde, m ga -aga n'ụsọ osimiri ka mụ na ezinụlọ m nwee ọ goodụ: Nkọwa okwu gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Na Sọnde a ga m enwe ụbọchị izu ike ya mere a ga m enwe obi ụtọ: Igandean, atseden eguna izango dut, pozik nago
Ọnwa nke afọ na Basque bụ ndị a:
en Español na Basque
Ọnwa Jenụwarị na -amasị m n'ihi na ọ bụ mmalite afọ, oge imezu ebumnuche anyị: Utarrilaren gustatzen zait, urteak aurrera egin ahala gure helburuak betetzeko
Febụwarị bụ ọnwa a na -eme ememme Valentine: Otsailean hilabete bat ospatzen da San Valentin eguna
Machị bụ otu n'ime ọnwa kachasị amasị m: Martxo gehien gustatzen zaidan urteko hilabeteetako bat da
N'ọnwa June, echere m na m ga -aga France: Ekainean Franziara bidaia egingo dut
Enwere m obi anụrị n'ihi na n'ọnwa Julaị nke afọ a, m ga -emecha semester mahadum.
Ana m eji ego akwadebe n'ihi na n'August ụbọchị ọmụmụ m: Diruarekin prestatzen Ari naiz, abuztuan urteak daramatzat
Na Septemba aga m eleta nne nne m na Murcia: Irailean nire amona Murtsia bisitatuko dut.
Anyị na -akwado mmemme Halloween mara mma na Ọktọba: Halloweeneko festa bikaina prestatzen ari gara urrian
Ememe kachasị mkpa nke December bụ ekeresimesi: Abenduko ospakizunik garrantzitsuenak Gabonak dira
Oge nke afọ bụ ndị a:
N'oge okpomọkụ: ikuku
Oge oyi: negu
Na ụfọdụ ihe atụ:
Oge ọkọchị na -amasị m n'ihi na enwere m ike ịnụ ụtọ ezinụlọ m na ndị enyi m: Uda gustatzen zait nire familiarekin eta lagunekin gozatu dudalako
N'oge opupu ihe ubi, enwere m ike ịmasị okooko osisi mara mma n'ubi m: Udaberrian nire lorategiko lore ederrak miretsi ditut
N'oge mgbụsị akwụkwọ ọ bụ oge ịga Florence ileta nne na nna m: Udazkenean Florentziara joateko ordua da nire gurasoak bisitatzera
N'oge oyi, ọ na -amasị m iyi uwe dị mma iji nwee mmetụta nke ọma: Neguan, jantzi erosoak eroso sentitzen ditut
Abụ nke ọnwa na Basque
N'ikpeazụ, akụrụngwa bara ezigbo uru iji mụta ọnwa na Basque nke ọma bụ site na egwu a, nke dị mfe iburu n'isi:
Categories Euskera, Asụsụ Igodo bọtịnụ
Ngwaa nke Catalan: ndepụta na njikọta
Inicio » Asụsụ » Euskera » Ọnwa ndị dị na Basque
Nọmba na Basque site na 1 ruo 100
Ọnwa nke afọ na French
1 okwu na «Ọnwa na Basque»
October 15, 2018 na 3:23 pm